ဘေလီဇ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှဖွဲ့စည်းခြင်း, အခွန်ကောက်ခံမှု, ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်းနှင့်ကောင်းကျိုးများ
တစ်ဦးကဘေလီဇ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှတစ်ဦးကုမ္ပဏီနှင့်တစ်ဦးယုံကြည်မှုအကြားစပ်သည်။ အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တစ်ဦးယုံကြည်မှု၏အလှူရှင်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့် features တွေပါတဲ့ကုမ္ပဏီ၏ဥပဒေရေးရာပုဂ္ဂိုလ်ရေးထည့်သွင်း။ အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းထိန်းချုပ်မှုထိနျးသိမျးထားနိုငျတဲ့သူနိုင်ငံခြားသားများအားဖြင့်တစ်ခုတည်းကိုသာဖွဲ့စည်းထားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းသီးခြားနှင့်လွတ်လပ်သောဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဘေလီဇ် International Foundation 2010 ၏အက်ဥပဒေ (ပြင်ဆင် 2013) အားလုံးအမြစ်ကို၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းအုပ်ချုပ်။ အဆိုပါ 2013 ပြင်ဆင်ချက်နိုင်ငံခြားသားတွေဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုဘဲမြောက်မြားစွာတိုက်မြစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ တစ်ဦးထက်ပိုအခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်စီပေါ်မှာထိုင်ရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းသူကိုသာဘေလီဇ်နိုင်ငံသားတစ်ဦးလိုင်စင်ကိုရယူရပါမည်။ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများတွင်တစ်ခုအခြမ်း-by-side အမြင်အဘို့, ဒီကမ်းလွန်ရိုးအမြစ်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု နှိုင်းယှဉ်စားပွဲပေါ်မှာ.
ဘေလီဇ် Foundation မှကောင်းကျိုးများ
အောက်ပါတစ်ဦးဘေလီဇ် Foundation ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်များစွာအားသာချက်အချို့နေသောခေါင်းစဉ်:
•, စီးပွားရေး, နိုင်ငံရေး, သို့မဟုတ်မိသားစုအကျပ်အတည်းကနေကြွယ်ဝချမ်းသာထိန်းသိမ်းရေး;
ဘေလီဇ်အရှေ့ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသောအမေရိကအလယ်ပိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဗြိတိန်ဟွန်ဒူးရပ်စ်ဟုခေါ်တွင်စေရန်အသုံးပြုပေမယ့် 1981 အတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှလွတ်လပ်ရေးပေးသနားခံရပြီးနောက်၎င်း၏အမည်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၎င်း၏နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပုံတစ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူ၎င်း၏ဧကရာဇ်နှင့်တစ်ဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်နှစ်ခုအိမ်သူအိမ်သား national assembly ကိုအဖြစ်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက်နှင့်အတူတစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းပါလီမန်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘေလီဇ် Foundation မှအကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကဘေလီဇ် Foundation မှအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်:
• အဘယ်သူမျှမ အခွန်ကောက်ခံမှု: အားလုံးပါတီများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဘေလီဇ်ပြင်ပကနေဖြစ်ကြပါလျှင်မည်သည့်မျိုးမျှမအခွန်အခများရှိပါတယ်။ မှတ်ချက်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်နိုင်ငံတွေဆီကနေသူတို့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေထုတ်ဖော်ရပေမည်။
• စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု: တည်ထောင်သူ, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးဘေလီဇ်ပြင်ပကနေနိုင်ပါတယ်။
• ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း: တစ်ဦးကဘေလီဇ်အခြေခံအုတ်မြစ်ပြည့်စုံကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုပေးသည်။ အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်သူထံမှလွှဲပြောင်းပိုင်ဆိုင်မှုအပေါငျးတို့သပိုင်ဆိုင်သည်။ သီးခြားဥပဒေရေးရာ entity သကဲ့သို့, အခြေခံအုတ်မြစ်တည်ထောင်သူနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအနေဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအထီးကျန်။
• အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်း: တည်ထောင်သူနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုကိုပိုင်ဆိုင်ကြဘူးများနှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်အကျိုးခံစားရဖို့ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြန့်ဖြူးနှင့် ပတ်သက်. စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်မှုထိန်းသိမ်းထားသည်။ အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းသားစဉ်မြေးဆက်များအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်အစဉ်အဆက်များအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်၎င်းတို့၏အမွေခံမှဝင်ငွေဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: တည်ထောင်သူ, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်ကာကွယ်များ၏အမည်များအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းမထားပေ။
• အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်: အမှီတကဲအဘို့အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်လိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။
• အင်္ဂလိပ်: ဘေလီဇ်အရာရှိတဦးကသင်သည်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်။
အမှီတကဲတို့သည်အဖြစ်အတူတူသို့မဟုတ်အခြားဘေလီဇ်အခြေခံအုတ်မြစ်အလားတူနာမည်တစ်ခုကို select လို့မရပါဘူး။ မဟုတ်သလိုနာမည်တစ်ခုက၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်ဝိသေသလက္ခဏာအဖြစ်အထင်အမြင်မှားစေနိုင်ပါတယ်။
ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အမည်စကားလုံး "ဖောင်ဒေးရှင်းက" သို့မဟုတ်ယင်း၏အတိုကောက် "FDN" သို့မဟုတ် "Found" ၏တဦးတည်းနှင့်အတူအဆုံးသတ်ရပေမည်။ အခြားဘာသာစကားများအင်္ဂလိပ်ထက်ကိုသုံးပေမယ့်သင့်လျော်သော "ဖောင်ဒေးရှင်းက" ၏ဘာသာပြန်ချက်နှင့်၎င်း၏အတိုကောက်အားဖြင့်ရောမအက္ခရာကိုသုံးပြီးသူတို့သာဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကသူ့ဟာသူအတွက်ဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်သကဲ့သို့အဆိုပါဘေလီဇ်ဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်သူကနေလွှဲပြောင်းအားလုံးဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ဤသည်ကိုတည်ထောင်သူအနေဖြင့်အားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအထီးကျန်။
2 ။ အဆိုပါတည်ထောင်သူရဲ့အမည်နှင့်လိပ်စာ;
3 ။ ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်,
4 ။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ဖွင့် certified ရရှိထားပြီးအတည်ပြုခြင်းနှင့်အတူကနဦး property ကိုပဒေသာပင်များလည်း;
7 ။ (တဦးတည်းအဖြစ်ခန့်အပ်လျှင်) အတွင်းရေးမှူးရဲ့အမည်နှင့်လိပ်စာ;
8 ။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ဖွင့်အမည်နှင့်လိပ်စာ;
9 ။ အခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ၏အမည်များနှင့်လိပ်စာများကို (ဆန်ခါတင်အဖွဲ့ဝင်များကခွင့်ပြုထားပါသည်); နှင့်
10 ။ အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်. အခြားအရေးကြီးပြဋ္ဌာန်းချက်။
2010 ၏ဘေလီဇ် International Foundation အက်ဥပဒေတစ်ဦးတည်ထောင်သူနှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းစင်းလုံးငှားတစ်ခုသို့မဟုတ်အလားတူစာရွက်စာတမ်းကွပ်မျက်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခံရဖို့တစ်အခြေခံအုတ်မြစ်လိုအပ်သည်။ စာရွက်စာတမ်းတိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ခေါင်းစဉ်, အခွင့်အရေး, သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အကျိုးစီးပွားကိုတည်ထောင်သူရဲ့သဘောထားပါရှိသည်ဟုပြောသည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းထို့နောက်မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူတင်သွင်းပေမယ့်အများပြည်သူလက်လှမ်းမပေးပါ။
ဤစာရွက်စာတမ်းသည့် နေ့မှစ. 30 ရက်အတွင်းလျှောက်လွှာ International Foundation ၏မှတ်ပုံတင်မည်သို့ entry ကိုများအတွက်မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ပြီးရင်, International Foundation ၏မှတ်ပုံတင်မည်သို့အခြေခံအုတ်မြစ်၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်နေတဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်များကိုပေးစွမ်းနှင့်အောက်ပါအချက်အလက်များကို်တည်ထောင်တစ်ဦးလက်မှတ်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်:
ဤသည်တရားစွဲမှုတငျသှငျးနိုငျနှင့်ဥပဒေတစ်ခုတရားရုံးတွင်တရားစွဲခံရသည့်သီးခြားနှင့်လွတ်လပ်သောဥပဒေရေးရာ entity အဖြစ်အခြေခံအုတ်မြစ်တည်စေမည်။ တည်ထောင်၏လက်မှတ်သာလျှင်အများပြည်သူစစ်ဆေးခြင်းနိုင်သည့်အများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုပ်လိမ့်မည်။
တိုက်မြစ်၏တည်ထောင်သူကဖန်တီးကျော်လူတစ်ဦး၏ရှိရေးစခွေငျးငှါအဘယ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ တည်ထောင်သူတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်အလောင်းတွေဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ဦးကတည်ထောင်သူလည်းယင်း၏သာအကျိုးခံစားခွင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်တည်ထောင်သူအဆိုပါကာကွယ်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အပြည့်အဝထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲအဆိုပါတည်ထောင်သူနှင့်တစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပံ့ပိုးမည်သူမဆိုတစ်ဦးဘေလီဇ်နေထိုင်သူဖြစ်လို့မရပါဘူး။
အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းကောင်စီ, စီမံခန့်ခွဲကိုယ်စားပြုအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, တတိယပါတီနှင့်အတူအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုယ်စားဆောင်ရွက်သည်။ ၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများနှင့်တာဝန်များအခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ပဋိညဉ်စာတမ်းနှင့်အညီဖြစ်ရမည်။
အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ပဋိညာဉ်စာတမ်းတစ်ဦးကာကွယ်၏ရွေးချယ်ရေးပေးနိုငျသညျ။ ဒါဟာပုံမှန်အားတည်ထောင်သူများကသိကြများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသူတစ်ဦးဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ပဋိညာဉ်စာတမ်းဟာကာကွယ်မယ့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ, တာဝန်, အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ by-ဥပဒေများကိုအခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ကိုလည်းကာကွယ်၏ထိုကဲ့သို့သောသတ်မှတ်ချက်များပေးနိုငျသညျ။ အဆိုပါကာကွယ်မယ့်အခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကာကွယ်တည်ထောင်သူ, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်တာဝန်ကြွေးတင်နေသည်။
ရိုးအမြစ်ကိုကုသိုလ်ဖြစ်သို့မဟုတ် Non-ကုသိုလ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်; တစ်ခုသို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်သို့မဟုတ်တည်ထောင်သူအကျိုးခံစားရဖို့ထက်အခြားအဘယ်သူမျှမရညျရှယျပါ။
ရိုးအမြစ်ကိုဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြေခံအုတ်မြစ်အတွင်းရေးမှူးခန့်အပ်ရန် option ရှိသည်။
အစိုးရကမည်သည့်စာအုပ်ဖိုင်များ, အကောင့်မှတ်တမ်းများ, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်စာရင်းစစ်မလိုအပ်ပါဘူး။
• Capital ကိုလာဘ်အခွန်;
• Profits တွေအခွန်;
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်တစ်ခုသာအခြေခံအုတ်မြစ်နှင့် ပတ်သက်. အောက်ပါအချက်အလက်များကိုနှင့်အတူအများပြည်သူပေးပါသည်:
တည်ထောင်သူ, ကာကွယ်, နှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအမည်များကိုမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့အမည်များကိုအခြေခံအုတ်မြစ်စင်းလုံးငှားတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်နေစဉ်, တရားစင်းလုံးငှားအများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်ကိုဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်သော်လည်းဆန်ခါတင်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ခန့်အပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
100% နိုင်ငံခြားပိုင်ရှင်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုမရှိ, အခွန်, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, privacy ကိုအဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်နှင့်အင်္ဂလိပ်တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါသည်: တစ်ဦးကဘေလီဇ် Foundation မှအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်။